NGABA USMITH UZA KUTYHILA 'UBUDLELWANE OBUVULEKILEYO' KUNYE NENKOSIKAZI, XA SELE EFUNWA 'NGABAFAZI BEZINTOMBI' - HOLLYWOOD
Ngaba uSmith uza kutyhila 'ubudlelwane obuvulekileyo' kunye nenkosikazi, kanye xa wayefuna 'ngabafazi bezintombi'
Usaziwayo waseHollywood uWill Smith wathetha ngokungagungqiyo ngomtshato wakhe noJada Pinkett Smith kudliwanondlebe lwangoku ngendawo athe wayichaza ukuba esi sibini besinobudlelwane obuvulekileyo. Ukuxoxa ngememo yakhe ezayo, 'Ngaba' kunye ne-GQ, i ' Amadoda aMnyama ’ Umdlali weqonga wabelane ukuba iqabane lakhe alikholelwa kumtshato wesintu, kwaye ukutshata nomntu ongatshatanga naye bekungeyonxalenye yeminyaka yabo engama-23 yomanyano. Umdlali weqonga utyhile ukuba aba-2 babenolwalamano ngokwesondo nabantu abahlukeneyo ngaphandle komtshato, inye into yokuba wayenexesha elinzima lokwamkela ukukhuliswa ngokungqongqo kobuKristu.
ngu lolo jones uyintombi
UJada akazange akholelwe kumtshato oqhelekileyo.… UJada wayenobudlelwane obabunobudlelwane obungaqhelekanga. Ke ukhulele kwindlela eyahluke ngokupheleleyo kunendlela endikhule ngayo. Kwakukho iingxoxo ezibalulekileyo ezingapheliyo malunga, yintoni ukugqibelela kobudlelwane? Yeyiphi indlela efanelekileyo yokusebenza kunye njengesibini? Kwaye ubukhulu becala yinxalenye yolwalamano lwethu, ukutshata nomntu omnye kuye kwaba yinto esiyikhethileyo, singathatheli ngqalelo kumfazi omnye njengolwalamano olufezekileyo, uSmith wayalela i-GQ.
Ukuba nephupha 'lendoda yabafazi': uSmith
UWill Smith wongeze ukuba ngomhla wokuvalwa, wayephuphe ngokufumana abahlobo bamantombazana, ababandakanya uludwe lwe-A Halle Berry. Uthe into yokuba amantombazana angama-20 amthande kwaye amkhathalele abonakala ‘emnandi’ xa efikisa. Nangona kunjalo, akanqweneli ukucebisa ngombono wobudlelwane obuvulekileyo nabanye.
Andiyazi indawo endiyiqapheleyo okanye enye yokuba sishumi elivisayo, nangona kunjalo ingcinga yokundwendwela kunye namantombazana angama-20 endibathandayo kwaye ndiwakhathalela kwaye nayo yonke loo nto, kwabonakala ngathi yingcinga entle kakhulu, utshilo uSmith .
Umdlali weqonga utyhile ukuba wakhe isiseko senkolelo kunye noJada Pinkett Smith ovumele inkululeko yesi-2 yokufumanisa ngaphandle komtshato oqhelekileyo. Uyalele i-GQ, sinike inkolelo kunye nenkululeko, sicinga ukuba wonke umntu kufuneka azifunele eyakhe indlela. Kwaye umtshato kuthi awunakuba yintolongo. Kwaye andicebisi uhola wendlela yethu nakubani na. Andicebisi lo hola wendlela kuye nabani na. Kodwa amava inkululeko esiyinike omnye kunye noncedo olungenamiqathango, kum, yeyona nkcazo ilungileyo yothando.
Utata omncinci uJane benyo
cameron mathison net efanelekileyo
cnn boris sanchez umfazi
yintoni ikhephu elisekwe
ukumkanikazi iswekile isizini 1 isiqendu 8
Ngaba iAmazon ihambisa ngomhla woomongameli 2020
umnyama omnyama u-amangile uvuyo